AMBOSITRA : Lehilahy iray tratra nitazona basy tsy ara-dalàna natolotra ny Fampanoavana
Lehilahy iray no natolotra ny Fampanoavana tao Ambositra afak’omaly. Fitazonana basy tsy ara-dalàna no niampangana azy tamin’izany. 21 avril 2017
Raha ny vaovao voaray, dia ny herinandro lasa teo izy no voasambotry ny Zandary tany Ambalamarina, Kaominina Ivato Centre any amin’ny Distrikan’Ambositra. Loharanom-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo no nahafahan’ny Zandary nisava ny tranony. Rehefa natao ny fisavana dia nahatratrarana basy “Fusil d’assaut chinois (FAC)” na kalachnikov vita sinoa iray niaraka tamin’ny tranom-bala miisa roa ary bala 7,62mm miisa 60 tao aminy. Nosamborina avy hatrany ilay lehilahy ka rehefa natao ny famotorana dia niaiky ny helony izy.
Araka ny nambarany hatrany dia mpanafatra ireo basy ireo ny tenany fa vehivay iray hafa no kosa manaparitaka izany. Efa nokarohin’ny Zandary ihany koa ity vehivavy mpiray tsikombakomba amin’ity lehilahy ity. Rehefa nosamborina anefa ity farany dia nilaza ho tsy salama ka mbola mitsabo tena any amin’ny hôpitaly ary efa ambenan’ireo Zandary fatratra.
Isan’ny mampirongatra ny tsy fandriampahalemana ny fiparitahan’ny basy tahaka izao. Ny fiandohan’ity taona ity mantsy dia efa nisy ihany koa olona nahatratraran’ny Zandary basy tao Amoron’i Mania, basy izay amin’ny karazany FAC niampy MAS36. Ankoatra izay dia basy miisa 5 ihany koa no fantatra fa miparitaka ao Toamasina ka efa karohin’ny mpitandro ny filaminana izay olona mitazona izany. Efa misokatra ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha fiparitahana fitaovam-piadiana ity.
“Tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe” FIKASANA HANONGAM-PANJAKANA, FANAKORONTANA … (327) 14 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (150) 13 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (112) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (92) 13 janvier 2021 Milaza hanova paikady amin’ny fanakorontanana ny firenena RODOBEN’NY MPANOHITRA (61) 14 janvier 2021 Nahazo ny anjarany mpanodina voankazo sy mpanarato FILOHA ANDRY RAJOELINA (57) 12 janvier 2021